Ny Ratra manokana ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Korea ho an'ny Isan-Tanàna - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Ny Ratra manokana ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Korea ho an'ny Isan-Tanàna
Isika dia azo antoka fa ho afa-po na ny asa sy ny saram
Ny ratra manokana amin'ny lalàna dia manondro ny ara-dalàna fanafody sy ny fiarovana tafiditra ao an-trano fitoriana nitondra vokatry ny wrongful fitondran-tenaRaha ny marina, ny teny hoe"takelaka"dia avy amin'ny teny latina midika hoe manova, ny ratsy, na ny ratsy. Mifanohitra ny lalàna mifehy ny heloka bevava, ny takelaka asa tsy anjara ny governemanta manameloka ny wrongdoer.
Ny marimarina kokoa, ireo toe-javatra mahakasika ny tsy miankina mpitory mitady tambin-karama (matetika vola) ho an'ny voka-dratsy nateraky ny voampanga ny asa.
Anguk Lalàna Anjara fanompoana (ANGUK) dia ny fanompoana manontolo lalàna birao any Seoul, Korea ary manome isan-karazany ny ara-dalàna ny asa. Fampiharana faritra ahitana ny fifindra-monina, ny jeneraly ny orinasa, orinasa ara-bola, hetra, fitantanan-draharaha, bankirompitra, ny fandaminana indray sy ny fanavaozan-drafitra, ny fiombonana sy ny acquisitions.
Lalàna Hentitra ny Fifampidinihana Kisendrasendra Saran'ny Carte Karatra Ahnse Lalàna Birao dia feno fanompoana ny lalàna office afaka manazava malalaka spectrum ny raharaha ara-pitsarana izay zava-tsarotra ny ankamaroan'ny orinasa ankehitriny.
Satria ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ny fitakiana ny ara-dalàna ny asa mifanaraka araka ny zavatra ilainy manokana ny toe-javatra tsy manam-paharoa, Ahnse dia natokana tao. Lalàna Hentitra ny topy maso Toy ny ampahany amin'ny fampidirana ny tambajotra, McDermott ny Seoul birao manome torohevitra sy stratejika tari-dalana ho amin'ny iraisam-pirenena orinasa ny mivoaka ny asa ara-barotra, miaraka amin'ny fanamafisana ny orinasa varotra (fiombonana acquisitions), ny fananana ara-tsaina, - pitsarana. Lalàna Hentitra ny topy maso Baker McKenzie ny birao ao Seoul nisokatra tamin'ny volana Mey, ny fanamafisana orina ny Mafy ny fitantarana ao Azia-Pasifika koa maneran-tany, ary mampiseho ny nanohy fanitarana ho avo-fitomboana tsena. Ny birao ao Seoul dia Mafy ny rd birao maneran-tany sy ny faha- birao ao Azia-Pasifika. Lalàna Hentitra ny topy maso Simpson Thacher Bartlett LLP manome voarindra ara-dalàna ny toro-hevitra sy ny fanehoana ny sasantsasany amin'ireo lehibe indrindra sy tena sarotra transactional-pitsarana sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ny birao foibe any New York ny asa amin'ny voizin'olon-droa amin ny anjara fanompoana ao Beijing i Hong Kong, Londres, Los.
Lalàna Hentitra ny topy maso Amin'ny efa ho telo-polo taona ny traikefa sy ny fahaizana amin'ny roa ao an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena fanao, Lee Ko dia tena hajaina ny mpitarika sy nametraka ny anarany ao Korea amin'ny fanomezana tanteraka isan-karazany ny ara-dalàna sy consulting asa ho an'ny eto an-toerana sy iraisam-pirenena ny raharaha.
Ny fivoriana voalohany dia maimaim-poana
Lalàna Hentitra ny topy maso Mpisolovava amin'ny Ezer manome avo kalitao matihanina ara-dalàna ny asa ho mitombina ara-dalàna ny saram. Manao izay vitantsika isika mba hiarovana ny mpanjifa' zavatra mahaliana, nanome, na izany aza, fa nataony fanamafisana ny marina sy ny rariny. Ny lalàna Office Yesohn tolotra ara-dalàna ny asa ho an'ireo mpiasa mpifindra monina, ireo mpifindra monina, ny mpitsoa-ponenana mpiadina, multi-kolontsaina ny fianakaviana sy ny avy any ivelany ny mponina any Korea. Isika miteny anglisy, Urdu, Hindi, Farsi, ny teny frantsay sy ny teny koreana.
Aoka isika hihaino anao. Geumhae dia vonona ny hanome anao ny fakan-kevitra ny tolotra momba ny fahazoan-dalana na na inona na inona olana ara-dalàna mifandray amin'ny raharaham-barotra ao Korea, ary isika no mety hamaha ny olana ara-dalàna tsy maintsy ho anao.
Ny manaraka-toe-javatra sasany ohatra fa Geumhae efa voavaha. Tranga iray Ny mpanjifa avy any Shina niezaka. K L Vavahady LLP maneho mitarika ny global orinasa, ny fivoarana sy ny afovoany-tsena ny orinasa, ny renivohitra-tsena ireo mpandray anjara, sy ny mpandraharaha eo isaky ny orinasa lehibe vondrona toy izany koa ny vahoaka sehatry ny fikambanana, ny toeram-panabeazana, fikambanana mpanao asa soa sy ny olona. Ny fomba fanao dia robustly iray. DLA Piper nanjary iray amin'ireo lehibe indrindra ny ara-dalàna mpanome tolotra ao izao tontolo izao tamin'ny taona ny alalan ny fiombonana tsy tafiditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Raha lehibe amin'ny ambaratonga, ny fiombonana paikady dia tsotra - mba hamoronana fikambanana iraisam-pirenena ny fomba fanao ara-dalàna mahavita mikarakara ny manan-danja indrindra ara-dalàna ny zavatra ilain'ny. LIO Mpiara-miasa dia mavitrika koreana lalàna mafy ny fanomezana feno ara-dalàna ny asa iraisam-pirenena sy ny mpanjifa eto an-toerana, amin'ny specializations amin'ny fahasalamana ara-dalàna, ara-pitsarana, sy ny orinasa varotra. DR ATIDOHA no iray amin'ireo Korea folo lehibe indrindra amin'ny lalàna orinasa maherin'ny zato ny mpisolovava sy mitohy, mba hanitatra ny tambajotra ny sampana birao amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona misy azy amin'ny an-tampony ny lalàna orinasa any ivelany. Tamin'ny volana janoary, Atidoha ny Lalàna Iraisam-pirenena Group, orinasa lalàna mafy izay naorina tamin'ny taona natambatra.
Bae, Kim Lee no iray amin'ny lehibe indrindra, ary lava indrindra nanorina ny fomba fanao iraisam-pirenena any Korea.
Izany dia ekena ho toy ny iray amin'ireo ambony fanompoana manontolo lalàna orinasa sy ny mpisava lalana ao amin'ny lalàna hentitra ny fitantanana ny tany Korea. Ela no heverina ho ny firenena azo iadian-kevitra aloha mpitarika pitsarana sy ny mpanelanelana, ny mafy manana. Koreana lalàna mafy, monina ao Seoul, fanatitra maro samihafa ara-dalàna ny asa ny koreana sy ny mpanjifa iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny orinasa, - pitsarana sy ny mpanelanelana, ny distrikan'i admiralty sy ny fari-dranomasina lalàna, ny fitaterana an'habakabaka, an-dranomasina, ny fiantohana, ny varotra iraisam-pirenena, ny ratra manokana, sy ny zavatra hafa koa. Malagasy, koreana Aram ny Lalàna Iraisam-pirenena Birao dia feno fanompoana lalàna mafy ao Seoul, Korea, miaraka amin'ny fampiharana emphases ao amin'ny faritra ny raharaham-barotra iraisam-pirenena, orinasa, ny banky fitantanam-bola, ny hetra, ny fari-dranomasina shipping, vaovao ny serasera, sahy, antitrust sy ny fananana ara-tsaina ny lalàna. Ny lenta ny mafy ¡s. Toy ny kely mafy ny fanompoana top-drawer orinasa mpanjifa, Aurora Lalàna Anjara fanompoana tsy maintsy nitsahatra mifantoka amin'ny asa fanompoana tsara dia tsara ho manaiky sy ara-drariny, sy amin'ny fomba tena manokana sy ny dian-tanana manokana ity.
Miaiky isika fa raha ny kely mafy miseho ho 'toy' ny lehibe kokoa ny mpifaninana, tsy misy.
Ahn Mpiara-miasa dia ny Busan-monina lalàna mafy izay manome azo ianteherana, feno isan-karazany ny ara-dalàna ny asa eo amin'ny sehatry ny orinasa lalàna ao anatin'izany ny fakan-kevitra ara-dalàna ny asa fanompoana ho an'ny orinasa, sivily lalàna mifehy ny heloka bevava, ny fitantanana ny hetra lalàna, ny banky ny fiantohana ny lalàna, ny tontolo iainana, ny tsy fahaiza-mampihatra ny fitsaboana, ny asa. Lim, Chung suh baolina hita ao Seoul, Korea. Ny mafy, niorina tamin'ny taona, dia fito mpisolo vava. Mafy ny mpikambana dia tena mirehareha ny hanambara fa zava-dehibe toy ny iray amin'ireo mpitarika ny lalàna anjara fanompoana ao amin'ny sehatry ny orinasa lalàna sy pitsarana araka izany dia mahakasika ny kalitao ny asa.
Ny torimaso-tsy mahazo mitondra fiara
פתרון סכסוכים, עורכי-דין, משרדי עורכי דין בקוריאה על כל העיר
© 2021 Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.